အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မှာ ဘုရားရှင်က ကိန္နရာတို့
လူစကားမပြေားရခြင်း အကြောင်းနှစ်မျိုးကို မိန့်တော်မူတယ်။
“ရဟန်းတို့၊ ကိန္နရာတို့ဟာ အကျိုးထူးနှစ်မျိုးကို မြော်မြင်ပြီး
၁။ မဟုတ်မမှန်သောစကားကို ငါတို့ မပြောဆိုမိကြပါကုန်လင့်၊
၂။ သူများကိုလည်း မဟုတ်မမှန်သောစကားဖြင့် ငါတို့ မစွပ်စွဲမိကြပါကုန်လင့်။
ဤအကျိုးနှစ်မျိုးကို မြော်မြင်ကြလို့ ကိန္နရာတို့ဟာ လူစကားကို မပြောကြကုန်” တဲ့။
လူစကားပြောရမှာ တော်တော်ကြောက်ကြတာပါလား။ ကြောက်လည်း ကြောက်ချင်စရာပါ။
စကားကလည်း ပြောပါများရင် အမှန်နည်းပြီး အမှားများလာတယ်။
လိမ်ညာစကား၊ ပြိန်ဖျင်းစကား၊ အတင်းစကား၊ ရန်စကား၊ အကျိုးမဲ့ ဟိုရောက်ဒီရောက်စကား၊
သူများမကောင်းကြံတဲ့စကား၊ ကဲ့ရဲ့တဲ့စကား၊ နှိမ့်ချတဲ့စကားစတာတွေ ပြောဖြစ်တာများတယ်လေ။
ဒါကြောင့်လည်း ပညာရှိတွေဟာ စကားပြောနည်းကြတယ်။
ပြောရင်လည်း ပညာနဲ့ ယှဉ်တဲ့စကားကိုပဲ ရွေးပြောကြတယ်။
ကြမ်းကျွံရင် နှုတ်လို့ရတယ်။ စကားကျွံရင် နှုတ်လို့မရဘူးလေ
သံသရာထိပါ ၀ဋ်လိုက်ခံရတဲ့ သာဓကတွေ ရှိတာတာပဲ။
ဒါကြောင့် မပြောမီ ဆင်ခြင်၊ ဆင်ခြင်ပြီးရင် သတိနဲ့ပြော။
ဒါဆိုရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရွှေစကားတွေ ထွက်လာမှာပေါ့။
(Ashin Kavisara)ပေ့မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်..
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 12/23/2013 1 ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ဘ၀သံသရာခရီးကို လျှောက်လှမ်းကြတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်တည်း
လျှောက်လှမ်းကြတာ ရှိသလို နှစ်ယောက်တွဲပီး လျှောက်လှမ်းကြတာလည်း
ရှိပါတယ်..တစ်ခါတစ်ရံ နှစ်ယောက်တွဲပီး လျှောက်ရတာ အဆင်ပြေသယောင်
ရှိပေမယ့် အဆင်မပြေတာတွေလည်း အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်..
နှစ်ယောက်တွဲပီး လျှောက်လှမ်းဘို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့
မိမိအနေနဲ့ နှစ်ယောက်တွဲပီး မလျှောက်ရလို့လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့..
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲရံ လက်ယာရံဖြစ်ကြတဲ့
တစ်ခုသော ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကာလ ငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာ
ပြည့်စုံကြတဲ့ သူဌေးနှစ်ဦးဖြစ်ကြစဉ်မှာ အရှင်သာရိပုတြာလောင်း
သရဒသူဌေးဟာ ကာမဂုဏ်အာရုံအပျော်အပါးတွေကို စွန့်ခွါပီး
ဘ၀ထွက်ပေါက်လမ်းကို ရှာကြံဘို့ သွားခါနီးမှာ သူ့သူငယ်ချင်း
ဖြစ်တဲ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်လောင်းကို သူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဘို့
ခေါ်ပေမယ့်လည်း ခေါ်မရတဲ့အခါမှာ သူ့သူငယ်ချင်းကို ပြောခဲ့တဲ့
စကားတစ်ခွန်းကတော့ တော်တော်လေး မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်..
သူငယ်ချင်းအဖော်ဆိုတာ ငါ့ဘ၀အတွက်အရေးမကြီးပါဘူး “တဲ့…
အထက်ပါ စကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲဆိုတော့
မိမိဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး အမွန်မြတ်ဆုံး အနှစ်သာရအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဓမ္မတွေဟာလည်း ပစ္စပ္ပန် တမလွန်ဘ၀လမ်းခရီးကို
လျှောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ မိမိကျင့်ကြံအားထုတ်ရင် အားထုတ်သလောက်
ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဘ၀လမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းကြတဲ့နေရာမှာ
တစ်ယောက်တည်းပဲ လျှောက်လျှောက် အရေးကြီးတာက
ခရီးရောက်ဖို့ပါဘဲ.. နှစ်ယောက်တွဲပီး လျှောက်ပေမယ့်လည်း ခရီးမရောက်ဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းပဲ လျှောက်လိုက်ပါ..
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 12/23/20130ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ကြတ္တိကာ နက္ခတ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ လတစ်လ..ဒီလ
ဆီးနှင်း မြူတိမ် သူရိန် မီးခိုး
ညစ်မျိုးငါးဝ ကင်းစင်လှပတဲ့ ညစ်ည ..ဒီည
မယ်ဇလီပင်တွေ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ညတစ်ည..ဒီည..
ဒီညဟာ လောကီ လောကုတ္တရာ
တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်ည အမှတ်တရအဖြစ် ရေးစပ်သီကုံးပါသည်။
လူသိ မသာ ဖြစ်ပါစေ... လူမသိ မသာ မဖြစ်ပါစေနဲ့
လောကမှာ လူသေသွားခဲ့ပေမယ့် ကျန်ရစ်သူလောကသားတွရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းတွေ ကျန်နေခဲ့ရင် အဲဒီမသာ(အသုဘ)ဟာ လူသိမသာဖြစ်ပီးလူသေသွားပီးနောက် ကျန်ရစ်သူလောကသားတွေစိတ်ထဲမှာ ဘာဂုဏ်သတင်းမှ ကျန်မနေရစ်ခဲ့ဖူးဆိုရင် အဲဒီမသာ(အသုဘ)ဟာ လူမသိ မသာဖြစ်သွားတတ်တာ သဘာဝပဲ..ဒါကြောင့် လူသေပီးနောက် ကျန်ရစ်သူလောကသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ မိမိရဲ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်း ကျန်ခဲ့စေနိုင်တဲ့ လူသိ မသာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် လောကကောင်းကျိူး တစ်မျိုးမျိုးလောက်တော့ လူ့ဘ၀ရခိုက်လေးမှာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လုပ်သွားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်...
အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ရောက်ဖို့ဆိုတာ ငရုတ်စေ့ပျိုးပင်ပေါက် စိုက်ပျိုးရသလိုပါဘဲ..
ဘ၀ဆိုတာ မအောင်မြင်ခင် အစပိုင်းအချိန်လေးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ခနိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့ခြင်းစတဲ့ လောကဓံတရားတွေကို ခံရလေ့ရှိပီး အောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ ခနိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့ဒဏ် လောကဓံတရားတွေဟာ အောင်မြင်မှု အရှင်သခင်ရဲ့ ခြေတော်ရင်းအောက်မှာ ၀ပ်စင်းပျောက်ကွယ်သွားရတာ သဘာဝပဲ..
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင်..ငရုတ်သီးစေ့လေးတွေဟာု မျိုးပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာ
အစပထမ ပျိုးပင်လေးတွေ အညှောင့်ထွက်လာအောင် အပေါ်ကနေ သစ်ခက် ၀ါးခက်ဝါးဓနိဖက်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်တာကို ခံခဲ့ရပေမယ့် အစေ့ကနေ အညှောင့်ထွက် အပင်ပေါက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ အပေါ်ကနေ ဖုံးဖိတဲ့ ဒဏ်ကို မခံရတော့သလိုပါပဲ..ဘ၀ဆိုတာဟာလည်း မအောင်မြင်ခင်အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖိနှိပ်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်မှုဒဏ်တွေ ခံကြရပေမယ့်
အောင်မြင်လာချိန်မှာတော့ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့သံတွေဟာ အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တာ လောကကြီးက ပေးတဲ့ သဘာဝတစ်ခုပဲ…
ကုသိုလ် ပညာ ဥစ္စာရဖို့ သင့်ရာဒေသအမြဲနေ..
မိမိရောက်ရှိနေတဲ့ အရပ်ဒေသတစ်ခုဟာ ကုသိုလ်ရယ် ပညာရယ် ဥစ္စာရယ်သုံးခုထဲက တစ်ခုခုတော့ ရရှိမှသာလျှင် မိမိဘ၀အတွက်အချိန်ကုန်ရကျိုး ပင်ပန်းရကျိုး နေရကျိုး နပ်ပါလိမ့်မယ်..
အဲဒီ(၃)မျိုးထဲက မိမိအတွက် တစ်ခုမှ မရရှိနိုင်တဲ့ အရပ်ဒေသဖြစ်နေရင်တော့ အဲဒီအရပ်ဒေသဟာ မိမိအတွက် သင့်လျှော် လျှောက်ပတ်တဲ့ အရပ်ဒေသတစ်ခု မဟုတ်သလို
မင်္ဂလာမရှိတဲ့အရပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာမို့ ဘာကိုမှ ငဲ့ကွက်တွယ်တာမနေပဲ ချက်ချင်း ပြန်ထွက်ခွာဘို့ ကြိုးစားလိုက်ပါ..
မင်္ဂလသုတ်တရားတော်မှာလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓက (၃၈)ဖြာတရားတော်ကို ဟောကြားရာမှာ
ပဋိရူပ ဒေသ၀ါသောစ .(သင့်သင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ အရပ်ဒေသမှာ နေထိုင်ခြင်းဟာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တယ်)လို့ဟောကြားခဲ့တယ်မဟုတ်လား..
သံဃာညီညွတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးကိုပါ အလေးထားတော်မူခဲ့တဲ့ တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး
မိမိအနေနဲ့ စာဖတ်သူများသိစေရန် ရှေးဦးစွာ အစီရင်ခံ တင်ပြလိုတာကတော့
ပိဋကတ်သုံးပုံ နှုတ်ငုံ ဆောင်နိုင်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ကမ္ဘာအေး၊ တိပိဋက မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ပဓာန နာယက ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလာလင်္ကာရဆိုတာ အခု မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံက တိပိဋကဘွဲ့ရ ဆရာတော် (၁၁) ပါးအနက် လေးပါးမြောက်ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် သက်တော်
(၂၇ )နှစ်အရွယ်မှာပိဋကတ်သုံးပုံကို ရေးဖြေ နှုတ်ဖြေ နှစ်မျိုးလုံး
အောင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက် တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကဝိဒ ဘွဲ့တော်နှစ်မျိုး ရခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ၁၉၉ဝ ခုနှစ်ထဲမှာဖမ်းဆီးပီး နှိပ်စက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။
ထောင်ကလွတ်အပီးမှာ စစ်အစိုးရက ဆရာတော်ကို ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပီး ၅ထပ် ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်၊
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ၂၀၀၆ခု စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဘန်ကောက်ကနေ ရန်ကုန်အပြန် ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်ကစပီး
(၂၆) ကြိမ်တိုင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဘဲ ဆေးကုသတော့မယ်ဆိုပီး အပြန် ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ ခုလို ပျံလွန်တော်မူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ရန်ကုန်ပြန်သယ်ဘို့အတွက် ဆရာတော်ကြီးကို ကြည်ညိုပီး ဆေးကုသစရိတ်တွေ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး Wichit Yatib က လေယာဉ် စင်းလုံးငှားပီး ကူညီခဲပါ့တယ်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အန္တိမ ဈာပနကို ရန်ကုန်မြို့မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်မှာ တရားပွဲသုံးရက်နဲ့ ကျင်းပခဲ့တယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒနဲ့ ယောဆရာတော်က တရားဟောပြီး စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်နဲ့ တံွံတေးဆရာတော် ဦးဣန္ဒကတို့က တရားဟောပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ သီတဂူဆရာတော်က တရားဟောပြီး စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန် ရေဝေးသုဿန် သီးသန့်ကွင်းမှာ လောင်တိုက်တွေနဲ့ ပူဇော်ပါတယ်၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ပျံလွန်တော်မူချိန်မှာ သက်တော် (၆ဝ) ဝါတော် (၄ဝ)မျှ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
မိမိသည် နိုင်ငံရေး ဘုန်းကြီးလည်း မဟုတ်ပါ နိုင်ငံရေး ပိုစ့်များလည်း မရေးပါ
သို့ သော် ယခု ရေးချိန်တန်လာသောကြောင့် ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ"
သံဃာတော်များအတွက် ပရိယတ္တိသာသနာနှင့်ဆိုင်သော ကျမ်းစာအားလုံး
ရေးသားတော်မူခဲ့သည် ။ သုတ္တန်ဘာသာဋီကာ တစ်အုပ်မျှသာ ရေးဖို့ 
ကျန်ခဲ့သည။်ရုပ်ပုံ ရှင်ကျင့်ဝတ်မှ စ၍ အခြေပြုသဒ္ဒါ နာမ်ဂိုဏ်းစဉ် အာချာတ်ဂိုဏ်းစဉ်မှသည်အဆင့်မြင့်မားလွန်းသော စာပေများ သံဃာထု
လူများအတွက် ရတနာဂုဏ်ရည် ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ မှသည် အဆင့်မြင့် ပုဂ္ဂိုလ်
ဖြစ်နိုင်သည့်အထိ ကျမ်းစာပေါင်း များစွာ ရေးသားတော်မူသည်။
သာသနာတော်ဝယ် နေလိုလလို ထွန်းထောက်တော်မူခဲ့၍ ၂၁ ရာစု
ဗုဒ္ဓဃောသ ဟုပင် နာမည်တွင်ခဲ့ နာမည်တင်နေဆဲဖြစ်သော
အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၏ တပည့်အရင်း တစ်ပါးဖြစ်တော်မူသည်။
သက်တော် ၂၇ သိက္ခာ ၀ါတော် ၇ ၀ါမျှဖြင့် တိပိဋကဓရ ဖြစ်တော်မူခဲ့၍
တိပိဋကဓရ ဖြစ်သည်နှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၊ကမ္ဘာအေး မဟာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက်ကိုတည်ထောင်တော်မူသည်။
တစ်ကြိမ်ပို့ ချလျှင် တစ်နာရီခွဲ ဖြင့် တစ်နေ့ လျှင် စာဝါ ၇ ၀ါ ၈ ၀ါမျှ
ပို့ ချတော်မူခဲ့သည်မန္တလေးမြို့တွင် သံဃာတော်များကို စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်၍
မန္တလေးသံဃာထုမှ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင် ဦးဆောင်သော န၀တ အစိုးရအားသပိတ်မှောက် သံဃာကံပြုတော်မူကြသည်။
သာသနာအတွက် အသက်စွန့်လှူထားတော်မူသော တိပိဋကဓရ ဆရာတော်သည်သပိတ်မှောက်ကံဆောင်သော သတင်းကို ကြားသောအခါ မိမိတပည့်များအားသြ၀ါဒပေးတော်မူသည်။
သံဃာဆိုတာ ညီညွတ်ရသည် .. သံဃာအဆက်ဆက် ညီညွတ်ခဲ့၍
မန္တလေးသံဃာက အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ကံဆောင်၍ ရန်ကုန်သံဃာက သပိတ်မမှောက်ခဲ့သော်သံဃာညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားလိမ့်မည်။
သံဃာညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှု၍ သာသနာအတွက် တာဝန်ကျေရမည်ဟု မိန်တော်မူသည်။
အင်းစိန်ရွာမ တိုက်အုပ်ဆရာတော် ။ ရွှေဘုန်းပွင့်ဆရာတော် ။ ကျောက်ကုန်းမေဒိနီ ဆရာတော်စသောထင်ရှားသောဆရာတော်များကို ပင့်ဖိတ်၍ ဆရာတော်က ဥက္ကဌ ။ အင်းစိန်ရွာမ တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကအတွင်းရေးမှုး တာဝန်ယူကာ စစ်အစိုရအား သပိတ်မှောက်ကံပြုကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့ ခဲ့သည်။
တပည့် စာချဘုန်းတော်ကြီးများကို စေလွှတ်၍ ၆ ထပ်ကြီး ဘုရားတွင် အစိုးရအားသပိတ်မှောက်ကံ ပြုစေတော်မူသည်။
ဒီသံဃာ သပိတ်မှောက်လျှင် နောက်ထပ်ကိုးကွယ်စရာ သံဃာများစွာရှိသည်ဟု သဘောထားသော စစ်အစိုးရသည် ထိုသို့ သပိတ်မှောက်ကံပြုခံရသည်ကို
နိုင်ငံတော် လမ်းဖွင့်ပွဲစသော ပွဲလမ်းများတွင် သံဃာများကိုပင့်သည် ။ မက်မောလောက်အောင်TVအောက်စက်မှအစ လှူသည် .. သို့သော်
ငယ်ဖြူသံဃာများ ကြွရောက်တော်မမူကြ..တောထွက်သံဃာများသာ ကြွရောက်တော်မူကြသည်..အစိုးရပြုလုပ်သော သံဃာ့ အခန်းအနားများတွင် သံဃာ့ထိုင်ခုံနေရာများစွာ လွပ်လပ်နေသည်….
ထို့ ထက်ပိုဆိုးသည်ကား စစ်တပ် မိသားစုဝင်များ ကွယ်လွန်သော်
အသုဘသို့ကြွရောက်ခါ ရေစက်ချ သရဏဂုံတင်ပေးမည့် သံဃာတော်မရှိဖြစ်ရသည်၊
မိမိတို့ရဲ့တိပိဋက မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းသည် ချော်တွင်းကုန်း ကပစ ၁၀၆ စစ်တပ်နှင့် နီး၍ထိုသတင်းများကို သိခဲ့ရသည်..
မိသားစုဝင်သေလို့မှ အသုဘ ရေစက်ချ သရဏဂုံတင်ပေးမည့် ဘုန်းကြီးမရှိသော် မျက်ရည်ကျကြရသောအောက်ခြေ စစ်တပ်မိသားစုနှင့် အထက်အရာရှိများမှ တဆင့် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များပြဿနာ တက်ရတော့မည့်အခြေအနေတွင် န၀တ အစိုးရမှ အမိန့် ထုတ်ကာ သပိတ်လှန်မပေးလျှင် ပြင်းထန်စွာအရေးယူမည်ဟု ဆရာတော့်ထံ စာပို့ သည်၊နောက်ပီးမြန်မာ့အသံမှလည်ှး တနာရီခြားတစ်ခါ ထိုအမိန့် ကို အသံလွှင့်သည်၊အမိန့် ကြေငြာစာ ထုတ်လွှင့်ပြီးချိန်အတွင်း စစ်ချီတေး
ဆရာတော်က သပိတ်လှန်လက်မှတ် ထိုးမပေးလိုသော်လည်း အစိုးရအကြောင်းကိုသိတော်မူသော ဆရာတော်၏ ဆရာ မန္တလေး
မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက် သံတော်ဆင့်ဆရာတော်မှ ဖျောင်းဖျပြောဆို လက်မှတ်ထိုးစေတော်မူသည်…
ဆရာ့စကားကို မပယ်ရှားလို၍ သပိတ်လှန်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရသည်၊
ထိုညက မှတ်မှတ်ရရ မိုးကြိုး (၁၂) ကြိမ်ကျော်မျှ ပစ်သံကြားရသည်။
န၀တ အစိုးရ သတ်မှတ်ချိန်အမှီ သပိတ်လှန်လက်မှတ် ထိုးပေးခဲ့သော်လည်း
စစ်အစိုးရမှ အာဃာတတရားကြီးမားစွာဖြင့်လက်မှတ်ထိုးပြီး နောက်တစ်နေ့ 
သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံကြွတော်မူကြချိန် ဆရာတော်အား ဖမ်းခေါ်သွားကြသည်…
ဆရာတော် ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်သို့ ရောက်သည်ဟု သတင်မကြားရပဲ
တစ်လလောက်ကြာမှ မြစ်ကြီးနားထောင်သို့ ပိုဆောင်ခံရကြောင်း သိကြရသည်။
မြစ်ကြီးနားထောင်မပို့ခင် စစ်ခုံရုံးသို့ ပို့သည် .. ဆရာတော်အား စစ်ဆေးမည့်
ဗိုလ်မှုးကြီးအား အခြားဗိုလ်မှုးတစ်ဦးမှ မင်းစစ်ဆေးရမဲ့သူက
တခြားသူမဟုတ်ဘူး..တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုပြီး
စာရေးဆရာ ကုသလဗုဒ္ဓိ (ကောင်းကြွယ်)ရေးသားသောတိပိဋကဓရ
ဆရာတော်ကြီးငါးပါး စာအုပ်ကိုပေးခဲ့သည်။ထိုသို့ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ကျ
ထိုခေတ်ထိုအခါက သတင်းစာများတွင် ဘယ်ရဟန်းသည်
ဘယ်နေရာမှာ အရက်မူးနေသည်..ဘယ်မိန်ကလေးကို ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်သည်ဟု
သတင်းစာများတွင် ဓာတ်ပုံများဖြင့်သတင်းများစွာ လွှင့်ခဲ့သည်….
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင် မြစ်ကြီးနားဘက်သို့ခရီးစဉ်ထွက်သောအခါ
တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဖြစ်လျှက် နိုင်ငံရေးလုပ်သော ဘုန်းကြီးများလည်းရှိဟု
သတင်းစာတွင် 8 point စာလုံးမဲကြီးများဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်ကို
သတိထား သတိရ သူများ ရှာဖွေကြပါကုန်….
တိပိဋကဓရ ဆရာတော်သည် သံဃာညီညွတ်ရေး နှင့် သာသနာ့အရေးကိုသာ
ကြည့်၍ န၀တ အစိုးရအား သပိတ်မှောက်ကံပြုခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်
နိုင်ငံရေးလုပ်သော ဘုန်းကြီးလည်း မဟုတ်ပါ….
၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်..... လမ်းပေါ်ထွက်၍ မေတ္တာပို့ ကြသောသံဃာတော်များမှာ
အစိုးရမှ ယာယီ သင်္ကန်းပတ်ပေးသော အတုအယောင်များမှလွဲ၍စာသင်သားသံဃာတော်
ယာယီ အတုအယောင်များသည်လည်း မိဘ ဆွေမျိုး အသက်စည်းစိမ်
အိုးအိမ်ကိုကြောက်လန့်၍သာ လုပ်ကြရသည်ဟု ယူဆမိသည်..
သီလကြီးလေးပါးလုံခြုံလျှင် သံဃာစစ် သံဃာမှန်သာ ဖြစ်သည်
သံဃာဟူသည် ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါကမှ အတုအယောင် မရှိခဲ့ပါပေ…
သံဃာတော် အဆက်ဆက်သည် ဒကာ ဒကာမ တို့ အပေါ်ဝယ်
ကိုယ်တိုင် ပရိယတ် ပဋိပတ် သာသနာ့တာဝန်များ ကျေပွန်တော်မူကြရုံသာ မက
ဒကာ ဒကာမတို့ အား သံသရာဝယ် အထက်တန်း ဘ၀များသို့ တိုင်အောင်
တဆင့်တက်၍ နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် ပို့ ဆောင်ပေးတော်မူကြသည်..
သတ္တိ ဗျတ္တိရှိ၍ ထက်မြက်သော .. အတိုက်အခံ လုပ်သည်ဟု
အစိုးရမှ ယူဆသော သံဃာတော်များမှာ အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်
ဖိနှိပ်၍ လူဝတ်လဲ ခံခဲ့ရသည်ချည်းဖြစ်သည်
ဟိုးယခင် ခေတ်အခါက သာသနာတော်သန့် ရှင်းရေး အမည်တပ်လျက်
ထူးကြီးဆရာတော် ။ ဦးစံတင့် (စတုနိကာယကောဝိဒ) စသော ပုဂ္ဂိုလ်များ
နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ လူဝတ်လဲခံခဲ့ရသည်ကို ကြည့်လျှင် သိနိုင်ပေသည် ။
သိ၍ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခံခဲ့ရလျှင်သက်တော်ရွယ်တော်နှင့်
မိမိတို့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ငဲ့ကွက်တော်မူကြရသောကြောင့်ရေငုံ နှုတ်ပိတ်သာ
ယခု အခါ သံဃာတု သံဃာယောင်ဟူသော စကားလုံးများ ကျယ်လောင်စွာ
ခေါင်းခဲရ၍ နောင်တချိန် သာသနာတော်သန့် ရှင်းရေး
အမည်ပေးကာ နှိပ်ကွက်ဖို့ အစပျိုးခြင်းလားဟုထင်မိပါသည်။
သံဃာတော်များ ညီညွတ်တော်မူကြသည်မှာ ဘုရားရှင်၏၀ိနည်း ဥပဒေတော် ပယ်နှုတ်စရာ
ပြင်ဆင်စရာ ရှိသည်ဟုပြောစရာ မလိုလောက်အောင် ဥပဒေတိကျမှန်ကန်ခဲ့၍ ဖြစ်သည်။
အကယ်၍များ မြန်မာနိုင်ငံသည် မှန်ကန်၍ အများလက်ခံသော
စစ်မှန်သော ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာပါက စီးပွါးရေး ခိုင်မာဖွံ့ ဖြိုးလာပေမည်..
ထိုအခါ သာသနာဘောင်ဝယ် အချောင်နေသည်ဟု
ယူဆသူတို့က ယူဆနေကြသောသံဃာတော်များလည်း ယခုလောက် များတော့မည် မဟုတ်ပါ..
ဥပဒေ မှန်ကန်ဖို့ နှင့် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ သာ လိုပေသည်။
တာဝန်ကိုယ်စီ ကျေပွန်ကြဖို့အရေးကြီးသည် ။
ဘုရားလောင်း ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းသည် သောနုတ္ထိုရ် မုဆိုးအားအသေသတ်နိုင်
ပါသော်လည်း မုဆိုးခြုံထားသော သင်္ကန်းကိုမြင်ရသောအခါ ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို၏ အသုံးအဆောင်ကို ငါ့အားလာပြပေသည်ဒီလို အ၀တ်မျိုး ဘ၀သံသရာတွင်တွေ့ကြုံရဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းသည်ငါသည်လည်း ပါရမီဖြည့်နေသော ယောင်္ကျားကောင်း ယောင်္ကျားမြတ်ဖြစ်သည်သူ့ အသက်ကို မသေစေကောင်းဟု သာကြည်စွာ လွှတ်ပေးရုံမကဆင်စွယ် တစ်စုံ ..။ မုဆိုးအတွက် ၇ရက်အတွင်း ပြည်တော်ပြန်ရောက်စေရန်ပရိတ်အရံအတားများ ဖြင့် ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့သည်၊
တော်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး သံဃာတော်တို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးဆိုသည်ကို သိဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ခဲလေသည် ။
မိမိဘ၀ကို မိမိမတူးဖြိုမှီ အသိနောက်မကျသေးခင် မပြစ်မှားသင့်သော
သူများအား မပြစ်မှား မိစေဖို့စေတနာဖြင့်ရေးသားရပါသည်။
သာသနာတော်အတွက် အန္တရာယ် ကျရောက်မည့် အခါတိုင်း
သံဃာတော်သည် ကြောင့်ကြမဲ့ နေတော်မမူကြပါပေ..
မိမိရေးသားသောစာသည် မည်သူ့ ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ အစည်းကိုမျှ
နိုင်ငံရေးဆိုသည်ကိုလည်း စိတ်မ၀င်းစား ..
မပျက်စီးသင့်သောသူများ ဘ၀သံသရာ မပျက်စီးစေဖို့ 
သံဃာ့ဂိုဏ်း မသင့်စေဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိပြန်လည်၍ တူးဖြိုဖျက်ဆီးသူများ
မဖြစ်စေဖို့သာသနာအရှည်ခံ့၍ တည်တံ့စေဖို့ သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤသစ္စာစကား မှန်ကန်ပါက အမိမြန်ပြည် အေးချမ်းသာယာ၍
သာသနာတော်သည် နေလို လလို ထွန်းလင်းတောက်ပပါစေသတည်း ။
အမြဲတမ်း ဘေးမသန်းပဲ အေးချမ်းသာယာ သံသရာဝယ်
ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ခရီးကိုဖြတ် နိဗ္ဗာန်အထိ တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ ။
(စကားချပ်)ဆရာတော် ကြီး ပျံလွန်တော်မူတဲ့ အချိန်မှာ ဦးခင်ညွန့်
အကျယ်ချုပ် ဘ၀နဲ့ သွားကန်တော့သည်ဟုသိရသည် ။
သို့သော် အချိန်နှောင်းခဲ့လေပြီတကား..ဒီနေရာမှာ မြေမြိုခံရချိန်ရောက်တော့မှ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို တောင်းပန်ကန်တော့ခဲ့သော အရှင်ဒေ၀ဒတ်ကို
အသုံးမကျတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး..မိမိက အသုံးချတတ်ဘို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ
လောကမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာမှတော့ အသုံးမကျတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး ငါ့တို့ကျောင်းက ဦး(..)ကိုပဲကြည့်ပေါ့..သူဟာ သူများတွေလို ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးမမှီဘူးဆိုပေမယ့် ကျောင်းမှာအနဲဆုံး ရေနွေးအိုးတည်ခိုင်းလို့တော့ ရပါသေးတယ်..နောက်ပီး တို့ကျောင်းကို နေ့တိုင်းလာလာ ထမင်းစားနေတဲ့ ချက်ဖောင်းကြီးဆိုရင်လည်း ကျောင်းလာတဲ့အခါ ရေချိုးဘို့ ရေဘုံပိုင် နှိပ်ခိုင်းလို့ ရသလို သူ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်း အောက်ထစ်ဆုံး နွားကျောင်းခိုင်းလို့ ရပါသေးတယ်..ဒါကြောင့် လောကမှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးမကျဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး..အသုံးချတတ်ဘို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ..
(မွေးရပ်မြေ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရာကြီး၏ သြ၀ါဒကထာများမှ ပြန်လည် ကောက်နှုတ်တင်ပြပါသည်)
စက်ရုံအလုပ်နားရက်ဖြစ်တဲ့ တစ်ခုသော တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မလေးရှားရောက် တောသူ မိန်းမပျိုလေး တစ်ဦးဟာ ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့ အမေဖြစ်သူဆီကို ဤသို့ ဖုန်းဆက်စကားပြောလေ၏..
" အမေ..သမီး အခု ဒီမှာ အိုသွားပီ..နေရထိုင်ရတာ ဟိုအရင်လို မလွတ်လပ်တော့ဘူး အမေ.."
အထက်ပါ သမီးဖြစ်သူ ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရတဲ့ အမေဖြစ်သူက ထိတ်လန့်တကြားဖြင့် သမီးဖြစ်သူအား ပြန်ပြောလိုက်ပုံက.. "ဟယ်..ဘုရား..ဘုရား..ကြားလားမိုးကြိုး..သမီးရယ်.
.ညည်းနှယ်..တယ်မြန်လှပါလား.သမီး အိုသွားတာကို .အမေတို့ မိသားစုတောင် မသိလိုက်ရပါလား..အမေကတော့ဖြင့်လေ.. သမီး မလေးရှားကနေ ပြန်လာရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ဆိုပီး ရွာလယ်ပိုင်းက ဆန်စက်ပိုင်သူဌေး ဦးဖိုးထောင်ရဲ့သား မောင်တုတ်ကြီးနဲ့ စကားတောင် ကမ်းလှမ်းထားပီးသွားပီ သမီးရယ်..အခုသမီးလုပ်ပုံနဲ့ဆိုရင် အမေတို့တော့ ရွာမှာ မျက်နှာပျက်ရတော့မယ်ထင်တယ် သမီးရယ်"...
ဒီတော့ သမီးဖြစ်သူက အမေဖြစ်သူကို ဤသို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြန်ပြောလိုက်လေ၏.. "အမေ..ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ..ဟီး.ဟီး..အမေကတော့လေ ..တကယ်ပဲနော်..ဒီမှာ သမီး အိုသွားပီဆိုတာက ယောင်္ကျားရပီးသွားလို့ အိုတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး..ဒီရောက်ပီး တစ်လအကြာမှာ သမီးတို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံက လုပ်အားခအရမ်းနဲလို့ စက်ရုံပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် အိုဗာစတေးဖြစ်သွားတာကို အိုသွားပီလို့ ပြောတာပါ အမေရယ်. သမီးတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေးကို အခုထိ မှတ်မှိနေသေးတယ်..ဘာတဲ့ ခလေးဆို ငိုမှတဲ့..အခု သမီးအနေနဲ့ အမေ့ကို ပြန်ပြောလိုက်ချင်တာက “မလေးမှာဆိုရင် အိုမှ၊ ခလေးမှာဆိုရင် ငိုမှလို့လေ. ခလေးငယ်တွေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ငိုပေးမှ ပိုပီးကျမ္မာရေးကောင်းမွန်သလို. အခုသမီးတို့ နေတဲ့ မလေးရှားမှာလည်း ရောက်ပီးသုံးလေးလောက်နေရင် အိုဗာစတေးဖြစ်မှ ခေတ်မှီတာလို့ လူဟောင်းတွေ ပြောပြတာ ကြားဖူးတယ်လေ "
နောက်ဆုံး အမေဖြစ်သူ ပြန်ပြောလိုက်ပုံက......
အင်း..တော်ပါသေးရဲ့...သမီးရယ်..သမီးသာ အခုလို သေချာရှင်းမပြရင် အမေတော့ ရွာတောင်းပိုင်းက ဒေါက်တာ ပေါက်တူးရဲ့ အလောင်းစည်သူ ကျေးလက် ဆေးပေးခန်းကို သွားပြရမှာတော့ သေချာတယ်..သမီးရေ.. ...သမီးရေ..ဒါဘဲနော်..အမေ ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်..
အသိပေးခြင်း။ ။မိမိကြားဖူးထားတဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းဝန်ခံအပ်ပါသည်။.
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 8/08/20130ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 8/01/20130ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
“ကိန္နရီ ကိန္နရာတို့ လူစကားမပြောကြခြင်းရဲ့းအကြောင်း(...
နှစ်ယောက်တွဲလျှောက်မှာလား တစ်ယောက်တည်း လျှောက်မှာလ...
အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ရောက်ဖို့ဆိုတာ ငရုတ်စေ့ပျိုးပင်ပေါက...
သံဃာညီညွတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးကိုပါ အလေးထားတော်မူခဲ...
အသုံးမကျတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး..မိမိက အသုံးချတတ်ဘို့...